सोसल प्रोफाइल – Page7– आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / सोसल प्रोफाइल (page 7)
बेलायतमा मिडिया क्षेत्रमा जमेका सुजन
March 11, 2016	JOB Profile, लाइफ स्टाइल, सोसल प्रोफाइल0903
– नरेन्द्र बस्नेत लन्डन । सन् १९९० मा डेभिड फल्स पोखरामा पिता शालिग्राम पराजुली र माता मैना पराजुलीको कोखबाट माइला सुपुत्रको रुपमा जन्मिएका सुजन पराजुली सानै उमेरदेखि गायन तथा उद्घोषण क्षेत्रमा रुची राख्ने गर्दथे । कक्षा ९ देखि नै रेडियोमा सलग्न भएका पराजुलीले नेपालमा संचालित पोखरा एफ एम, माछापुछ्रे एफ ...
बाराक ओबामाको गाउँ र जीवनशैली (फोटोफिचर)
March 2, 2016	लाइफ स्टाइल, सोसल प्रोफाइल06,123
काठमाडौँ । धेरैलाई लाग्न सक्छ अमेरिकी रास्ट्रपति बाराक ओबामाको गाउँ कस्तो होला ? उनी कस्तो परिबारबाट आएका हुन् ? उनका दाजुभाइ, दिदि बहिनी कस्ता होलान? यहाँ हामीले केही तस्बिरहरु समेटेका छौ, जुन सन् १९८७ को हो । त्यस बेला ओबामा पहिलो पटक आफ्नो जन्मस्थान पुगेका थिए । उनले त्यहाँ आफ्ना ...
सर्वोच्चका तीन महिला न्यायाधीश यस्ता छन्
March 2, 2016	महिलाा आवाज /ससक्तिकरण, समाज खबर, सोसल प्रोफाइल0808
सुशीला कार्की एक महिनापछि मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुँदैछिन्। राज्यका तीनै अंगमा महिला प्रमुख हुँदै गरेका बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसमा समेत दुई जना महिला छन्। न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका ११ जनामध्ये मुख्य न्यायाधीशबाट मीरा खड्का र वकिलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधान परेका छन्। उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाई समितिले पास गरे ...
जन्मदिन मनाउने फरक शैली, सबैले यसै गरे कसो होला
March 1, 2016	लाइफ स्टाइल, समाज खबर, सोसल प्रोफाइल0822
जन्म दिन सबैको विशेष दिन । प्रत्येक वर्षमा एक दिन आउँछ । कसैले भव्य त कसैले सव्य रुपमा मनाउँछन । र, कसैलाई कहिले आउँछ, जान्छ पत्तै हुन्न । शहरमा जन्मदिन मनाउने बढ्दो प्रचलन छ । साथीभाई भेटघाट, खानपान र घुमफिरमा गएर आफ्नो जन्मदिन मनाउने तथा सबै आफ्न्त, छरछिमेकीलाई बोलाएर लाखौं ...
फेसबुकले भेरिफाइड गरेका ११ नेपाली पत्रकार को को हुन ?
March 1, 2016	आइसिटी प्रोफाइल, इतिहास, सोसल प्रोफाइल0784
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता ह्वातै बढेको छ । सेलिब्रेटी, पत्रकार, नेताहरुको प्रभाव सोसल साइटहरुमा पनि देखिने गरेको छ । फेसबुकको लोकप्रियता त अझ नजानिदो गरी बढेको छ । तर, आधिकारिक रुपमा फेसबुकले थोरै नेपाली नेता, सेलिब्रेटीहरुलाई भेरिफाइड गरेको छ । भेरिफाइड नेपालीमा केही पत्रकारहरु समेत परेका छन् । फेसबुकले ...
वसन्तपुर एसिडकाण्डमा परेकी सिमा बस्नेतको जिन्दगीमा यसरि आउदैछ खुसि!(फोटो-फिचर सहित)
February 29, 2016	महिलाा आवाज /ससक्तिकरण, लाइफ स्टाइल, सोसल प्रोफाइल07,295
नयाँ बानेश्वरस्थित नोबेल कलेजको गेटमा भेटिएकी सीमा बस्नेतलाई देख्दा गतसाल बसन्तपुरमा भएको कहालीलाग्दो एसिड काण्ड एकाएक सम्झना आयो । एसिडले डढेर बिग्रेको उनको अनुहार विस्तारै आफ्नै रंगमा फर्कंदै थियो । त्यसबाहेक उनको ओठमा फैलिएको मुस्कानले डंढेलो लागेको मैदानमा पनि फेरि मुनाहरु पलाउन सक्ने रहेछन् भन्ने लाग्यो । आफ्नो जीवनलाई कहालीलाग्दो ...
होचिमिन्हको भियतनामः यस्तो प्रेरक जीवन कहानी (फोटोसहित)
February 28, 2016	इतिहास, सोसल प्रोफाइल0791
होचिमिन्हको वास्तविक नाम गुयेन जैसे थान हो । उनको जन्म १९ मई १८९० मा भियतनामको किम्लीयन भन्ने गाउँमा भएको थियो । उनको बुवा सरकारी जागिरे थिए । फ्रेन्च उपनिवेशको विरोध गर्दै उनको बुवाले राजीनाम दिएका थिए । बुवाको राजीनामपछि होचिमिन्हको परिवार केही कष्टप्रद ढंगले गुज्रन थाले । होचिमिन्ह स्थानिय स्कुलमा ...
इन्स्टाग्राममा चर्चित १० सेलिब्रेटीको रुप यस्तो
February 27, 2016	आइसिटी मनोरञ्जन, लाइफ स्टाइल, सोसल प्रोफाइल0905
इस्टाग्राममा चर्चित सेलिब्रेटी को हुन् त ? यसको जवाफ दिएको छ, सोसल ब्लेडले जसले यस बर्ष इन्स्टाग्राममा चर्चामा रहेका १०० जनाको सूची सार्वजनिक गरेको छ । इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा बढि हेरिएका तथा खोजी गरिएका व्यक्तिहरुको शीर्ष स्थानमा यस बर्ष किम कार्दसीनलाई पछि पार्दै टेलर स्वीˆट आएकी छन् । सूचीमा व्यक्तिका अलावा ...